» एकताको नाममा नेताहरुमाथि खेल्ने र लडाउने काम भएको छ, यसरी एकता सम्भव हुँदैन् : अष्टलक्ष्मी शाक्य
५ भाद्र २०७६, बिहीबार १५:००
आफुलाई अनुकुलता हुँदा मौन, नभएपछि विधानको धारा खोज्ने नेताहरुको परिपाटी साँच्चै कस्तो हो ?
आज एउटै व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण दुई/तीन वटा जिम्मेवारी दिने अनि कसैलाई भूमिका विहिन बनाउने स्थिति बनाइएको छ । मुख्य मन्त्रीलाई प्रदेशको इन्चार्ज पनि अनि मन्त्रीलाई पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी पनि । त्यो मात्रै नभएर थप विभागीय जिम्मा पनि दिइएको छ । यसो गरेपछि इमान्दार नेता कार्यकर्ता कता पुग्छ ? उसको सक्रियता अनि क्रियाशिलता के हुन्छ ? अनी अर्को कुरा, धेरै ठाउँमा हात हालेर के सबै काम टुंग्याउन सक्ने स्थिति हुन्छ ?
जिम्मेवारी बाँडफाँड सचिवायलको निर्णयबाट भएको छ । पार्टीको वैधानिक अंग सचिवालयले गरेको निर्णय कसरी अवैधानिक ? अनि जिम्मेवारी पनि पार्टी भित्रकै ले लिएका छन् । पद त कसैले पाउँदा कोही खाली हुने स्वभाविक होइन् र ?
समाधान कसरी हुन्छ त ? पार्टीले कुन अंगले टुंगो लगाउने त ?
म स्थायी कमिटिको सदस्यको हिसाबले पनि ९ जना सचिवालयका नेताले फटाफटी निर्णय गर्ने काम बन्द हुनपर्छ भन्छु । सचिवालय भनेको कमिटि पनि होइन् । कमिटि भनेको त स्थायी कमिटि हो, केन्द्रिय कमिटि हो । आधिकारिक निर्णय त्यहाँबाट मात्रै हुन्छ । गलत निर्णय त्यहाँबाट उल्ट्याउने कुरा स्वभाविक हो । यसलाई अन्यथा बुझ्नु हुँदैन् । यस्तो हुँदा यसको पर्ने असर निर्णय गर्ने माथिका नेतृत्वले लिनुपर्छ । खबरडबलीबाट लिइएकाे विचार
२० हजार घुससहित मालपोत कार्यालयका नासु पक्राउ